www.xamarcade.com » Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in dib loo howlgelinayo Kuliyaddii ciidamada Jaalle Siyaad (Daawo Sawirro)
By xamarcade On: 17 Apr, 2018 In: wararka
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kormeer ku tagay kuliyadda Jaalle Siyaad oo hadda ay xarun u tahay ciidanka Burundi ee qaybta ka ah howl-galka Nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya.
Kuliyadda Ciidamada Jaalle Siyaad ayaa ka mid aheyd xiligii beri samaadkii kuliyadaha Jaamacadda Ummadda, waxaana lagu tababari jiray ardayda ka soo baxday dugsiyada sare ee dooneysa iney ku biiraan qeybaha kala duwan ee ciidamada dalka.
Kormeerka Madaxweynaha oo ay ku wehliyeen Madaxa howlgalka AMISOM Fransisco Madeira abaanduulaha Ciidanka Xoogga dalka Jen. C/llaahi Cali Caanood, Taliyaha Ciidanka Asluubta S/Guud. Bashiir Maxamed Jaamac (B.Goobe) iyo saraakiil kale
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cutub ka mid ah ciidanka AMISOM ee Burundi salaan sharaf ka qaatay, wuxuuna kulan gaar ah la yeeshay wakiilka Midowga Afarica ee Somalia iyo saraakiisha ciidanka Burundi ee saldhiga u ah kuliyada Jaalle Siyaad, Madaxweynaha ayaa ka xog waraystay xaalada xerada iyo dadaalada ciidanka Burundi ay wadaan kaasoo ku aadan howlgalka dowladdu ku cirib tirayso argagaxisada Al-Shabaab.
Wakiilka Midowga Africa ee Somalia Mr.Maderia ayaa Madaxweynaha Soomaaliya ku sheegay inuu yahay masuul ay ka go’an tahay dhismaha ciidan xooggan uu dalka yeesho iyo in la soo afjaro kooxda Al-Shabaab,wuxuuna tusaale u soo qaatay sida uu ugu soo guuray Wasaaradda Gaashaandhigga oo mudooyinkii dambe uu ku shaqaynayay.
Kulanka marka uu soo idlaaday Madaxweynaha ayaa kormeeray qaybaha ay ka kooban tahay kuliyada Jaalle Siyaad, wuxuuna ku amaanay ciidanka AMISOM siday xilli kasta ugu heelan yihiin dowladda iney ku garab siiyaan sidii Al-Shabaab loogu adkaan lahaa.
Abaanduullaha Ciidanka Xoogga dalka Jen. C/llaahi Cali Caanood ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo balan-qaaday in dowladu ay dib u howlgalineyso Kuliyaddii Ciidamada Jaalle Siyaad si loo saaro saraakiil iyo ciidamo tayadoodu aad u sareyso oo la wareega amaanka dalka.
Faahfaahin dagaal culus oo ka..
Faahfaahin dagaal culus oo ka dhacay degaanka Qooqaani